September 2021 - Nepali in Australia
September 30, 2021 autherLeaveaComment on बेलायतमा नेपालीले बेच्न थाले ‘कोदोको र’क्सी’, एक बोटलको मूल्य ४१ सय ६५ रुपैयाँ
लण्डन । बेलायतमा कोदोबाट उत्पादित र’क्सी बजारमा बिक्रि बितरण सुरु गरिने भएको छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा पि’उँदै आएको कोदोको र’क्सी ब्रान्ड बनाउन शुरू गरिएको छ । बेलायतमा कोदो लिमिडेट कम्पनीको स्थापना गरी नेपालीहरुले को’दोको र’क्सीको ब्राण्डिङ शुरू गरेका हुन् ।उक्त र’क्सीको यही अक्टोबर १० गते अल्डरशटमा एक औपचारिक रुपमा उदघाटन गर्न ला’गिएको कम्पनीका निर्देशक […]
सामाजिक संजाल टिकटक अहिले धेरैको रोजाईमा पर्न थालेको छ । टिकटकको प्रयोगकर्ताहरु अहिले करोडौं छन । नेपालमा पनि पछिल्लो समय टिकटक प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो छ । टिकटक मै आफ्नो प्रस्तुति देखाएर भाइरल भै विभिन्न क्षेत्रमा अवसर पाउनेहरु पनि थुप्रै छन अहिले । त्यस्तै टिकटकबाटै लाखौ कमाउनेहरु पनि अहिले भेटिन थालेका छन । यिनै मध्यका एक […]
September 30, 2021 autherLeaveaComment on अदालतको आदेश बिपरित घरभित्र मान्छे हुँदाहुँदै डोजर चलाएर घर भ’त्काउदै महेश बस्नेतनिकट वडाध्यक्ष थापा
भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष उत्तम थापाले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको ठाडो उल्लंघन गरी सर्वसाधारण जनताहरुको घरमा दलबलसहित आई डोजर लगाउने काम गरेका छन् । अदालते तत्काल स्थानीयको घर नभत्काउन निर्देशन दिए पनि मंगलबार दिउँसोदेखि घरभित्र मान्छे हुँदाहुँदै ब’लजब’स्ती डोजरको प्रयोग गरि घर भ’त्काइएको छ। कुनै जानकारी नदिई डोजर लिएर आएका वडाध्यक्ष थापाले […]
बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही, सूचना दिने व्यक्तिको नाम गोप्य राखिने
September 30, 2021 autherLeaveaComment on बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही, सूचना दिने व्यक्तिको नाम गोप्य राखिने
रामेछाप ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दशै विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ । प्रहरीले चाडपर्वको बेला यात्रुहरु नठगिउन भनेर नागरिक सहायता कक्ष समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । नागरिक सहायता कक्षको रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीले उदघाटन गरिसकेका छन् । प्रहरीले यात्रुसँग बढी भाडा लिने सार्वजनिक सवारीको साधनमाथि निगरानी बढाएको छ । प्रहरीले बढी भाडा […]
सहरमा वा बाक्लो बस्तीमा बस्नेहरुलाई चाडपर्व को यो नियम अवस्य हेर्नुहोस्…?
September 30, 2021 autherLeaveaComment on सहरमा वा बाक्लो बस्तीमा बस्नेहरुलाई चाडपर्व को यो नियम अवस्य हेर्नुहोस्…?
कोरोना भाइरसका कारण बालबालिकालाई समेत सबैलाई सुरक्षित रहन सरकारको आग्रह…? पछिल्ला प्रमाणहरूले बालबालिका कोभिड १९ बाट संक्रमित हुन सक्छन् र एकअर्का तथा वयस्कहरूलाई पनि संक्रमित गर्न सक्दछन् भनेर देखाउँदछ । यद्यपि, उनीहरू संक्रमणबाट गम्भीर रुपमा विरामी पर्ने जोखिम कम छ र साना बालबालिकाले ठूलाहरूलाई भाइरस सार्ने सम्भावना कम हुन्छ । बालबालिकालाई कोभिड १९ को कुनै […]
September 30, 2021 autherLeaveaComment on बुद्ध एयरका चर्चित पाइलट शेर्पालाई विमान चलाउन रोक कारण यस्तो छ
काठमाडौं, १४ असोज । ७३ जना यात्रु चढेको बुद्ध एयरको विमानको पाङ्ग्रा नखुल्दा २ घन्टा आकाशमा फन्को मारेर सफल अवतरण गराएर चर्चा बटुलेका पाइलट हुन् आङ्गेलु शेर्पा । उनी यात्रुको ज्यान जोगाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । तर, उनलाई विमान चलाउन रोक लगाइएको छ । विमान दुर्घटनाबाट जोगिएपनि के कति कारणले पाङ्ग्रा नखुलेको हो […]
भर्खरै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भयो यस्तो आदेश-
September 30, 2021 autherLeaveaComment on भर्खरै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भयो यस्तो आदेश-
काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्लामा आज (बिहीबार) राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अनावश्यक रुपमा भि’डभाड, मेला र महोत्व गर्न रोक लगाइएको छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द प्रसाद रिजालद्वारा जारी आदेश जारी गर्दै घर बाहिर मानिसहरु जम्मा हुन नपाउने, भिडभाड गर्न नपाउने, सभा जुलुस गर्न नपाउने, जात्रा महोत्सव र भोज आदि गर्न नपाउने भनिएको छ। […]
September 30, 2021 autherLeaveaComment on खेलिरहेका केटाकेटीले गाउँ नजिकैको खोल्सामा फालिएका बोरा भित्र ५ करोड रुपैयाँ भेट्टाएपछि…
काठमाडौ । कहिलेकाही सोच्दै नसोको घटना हुन्छ । केही हजारका नोट भेट्टाउनु त सामान्य नै हो ।तर करोडौ रुपैयाँ फेला पर्नु सामान्य पक्कै हैन । झारखण्डमा त्यहाँका स्थानीय केटाकेटीका लागि त्यस्तै एक असामान्य घटना भयो । राज्यको एक गाउँमा हालै चउरमा खेलिरहेका बालबालिकाहरुले ५ करोड रुपैयाँ नगद फेला पारेका छन् ।गाउँनजिकैको खोल्सामा तीन वटा फालिएको […]
September 30, 2021 autherLeaveaComment on बुलेट बाईकमा आयो अति शानदार नयाँ मोडल, १ लाख २५ हजार ८२५ मात्र मुल्य
काठमाडौ । बेलायती मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी रोयल इन्फिल्ड (बुलेट) को उत्पादन भारतामा धेरै छ । तपाईले धेरै दिन अघि देखि सुन्नुभएको होला रोयल इन्फिल्ड (बुलेट) को नयाँ रुप आउँदैछ । हो रोयल इन्फिल्ड ( बुलेट ) ले अन्ततः रोयल इन्फिल्ड ( बुलेट ) मेटेर ३५० सीसी आउने भएको छ । कम्पनीले मुल्य नै सार्वजनिक गरेको […]
टिकटकबाट १ अर्ब ३० करोड नेपाली कमाई, यी हुन् सबैभन्दा धेरै कमाउने व्यक्ति [ सूचीसहित ]
September 30, 2021 autherLeaveaComment on टिकटकबाट १ अर्ब ३० करोड नेपाली कमाई, यी हुन् सबैभन्दा धेरै कमाउने व्यक्ति [ सूचीसहित ]
काठमाडौ । जसरी संसार अधिक डिजिटल रूपमा जोडिएको छ र सोशल मिडिया युवा पुस्ताहरुमा प्रभुत्व जम्न थालेको देखिन्छ ।कम उमेरमा नै यसको प्रयोगबाट मानिसहरुले करोडौ कमाउन थालेका छन् । पछिल्लो समयको चर्चित भिडियो एप टिकटकबाट मानिसहरुले करोडौ कमाइरहेका छन् । उनीहरु भाग्यशाली र प्रतिभाशाली बन्दै सफलतापूर्वक लाखौं डलर कमाउन सक्षम भएका छन् ।सामाजिक मिडिया च्यानल […]